राष्ट्रिय समाचार – Page 245 – दाङ खबर
May242018 by DangkhabarNo Comments
भक्तपुर, जेठ १० । भक्तपुर नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को १० महिनाको अवधिमा रु ९१ करोड १५ लाख १९ हजार आम्दानी गरेको छ । यस अवधिमा नगरपालिकाले रु ७८ करोड १२ लाख दुई हजार खर्च गरेको नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो । गत २०७४ साल असार अन्तिममा प्रथम नगरसभाले चालू आवका लागि कूल रु एक अर्ब ५ करोड ५५ लाख बजेट पारित गरेको थियो । नगरपालिकाले देकोमिवा इटापाके आवास योजना’को लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग रु १० करोड ऋण लिएर त्यसलाई पनि आम्दामीमै राखेको छ । नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ख्वप कलेज, ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ, ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान, शारदा कलेज र जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि रु ४१ करोड खर्च गर्ने भएको छ । ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानका लागि चालू आवमा रु छ करोड ४८ लाख ७८ हजार खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकामा गत चैत मसान्तसम्म रु ती
चितवनबाट नेकपाको अध्यक्षसहित १७ जनाको प्रतिनिधित्व
चितवन, जेठ १० । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्षसहित चितवनका १७ जनाले केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन् । देशको मध्यभागमा रहेर पनि राजधानीसहित अन्य अवसरबाट वञ्चित जिल्लाबाट सत्तासिन दलमा केन्द्रीय अध्यक्ष र १६ जना सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज ईश्वरी भट्टराईका अनुसार केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता रामबहादुर थापा नौ सदस्यीय सचिवालयमा पर्नुभएको छ । त्यसैगरी तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट ११ जना र तत्कालीन नेकपा एमालेबाट छजनाले केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएको उहाँले बताउनुभयो । तत्कालीनको माओवादी केन्द्रबाट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अमिक शेरचन, नारायण दाहाल, डिआर पौडेल, सूर्य सुवेदी, सन्तु दराई, ईश्वरी भट्टराई, रेणु दाहाल, गंगा बे
प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल शुरु
काठमाडौँ, जेठ १० । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल शुरु भएको छ । यही सोमबार प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमाथि सम्मान गरिएन भनेर गरिएको प्रचार गलत रहेको भन्दै जनप्रनिधिमूलक संस्थाको नेतृत्वको आफ्नो मर्यादा हुने बताउनुभयो । गरिबी र बेरोजगारीको दुश्चक्रबाट हटाउने, बेरोजगारीको अन्त्य, आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आयात दोब्बर बनाउने, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेजस्ता विषय सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । पूर्वाधार निर्माणको विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको भन्दै नयाँ शक्ति नेपालका संयोजकसमेत रहनुभएका डा. भट्टराईले उक्त कार्यक्रम कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्टताको जरुरी रहेको उल्ले
काँग्रेस नेता गुरुङले भने पहिले प्रधानमन्त्री मातहतमा सुशासन
प्युठान, जेठ १० । नेपाली काँग्रेस प्युठानको ३ महिने गाउँ जाउ गाउमै रमाऔ, समय संगठन निर्माणमा लगाऔ अभियानको क्रममा अगुवा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ प्युठानमा छन्। प्युठानमा रहेका गुरुङले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै देशको राज्यसत्ता परिवर्तन भएपनि नेताहरुको सोच परिवर्तन नहुँदा समस्या आएको बताए। नेपाल प्रेस युनियनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गुरुङले जनजिबिकाका सवालमा नेताहरु बदलिन नसकेको तीतो पोखे। आफू समेतका नेताहरुलाई देखाउँदै उनले भने, नेपाली राजनितिमा नैतिकता हराएको छ। अब हामी नेताहरु परिवर्तन हुनुपर्छ । नेताहरुको सभ्रान्त जीवन शैलिले मुलुक परिवर्तन हुनै सक्दैन । सुगाँले रटे जसरी शुशासन नआउने उल्लेख गर्दै काँग्रेस नेता गुरुङले भने, प्रधानमन्त्री मातहतमा सुशासन हुनुपर्छ अनि मात्र अनुभुति गर्न सकिन्छ। दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणले मात्र मुलुक नबन्
सरकारलाई बाबुरामको सुझाव, ‘लाखे र काल भैरवको मुखुण्डो नलगाउनुस्, निजी क्षेत्र तर्सन्छ
काठमाडौँ, जेठ १० । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराइले सरकालाई निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाएका छन् । संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा नीजि क्षेत्र आकर्षित हुने कार्यक्रम ल्याउन सुझाएका हुन् । आफूले काठमाडौं आउनु अघि कुनै जात्रा नदेखेको तर काठमाडौ आएपछि काल भैरव र लाखे नाच हेर्दा आफू तर्सेको बताउँदै उनले सरकारलाई पनि लाखे र कालभैरवको मुखुण्डो लगाएर निजी क्षेत्र तर्साउने काम नगर्न भने । उनले भने, ‘कार्यक्रममा पुँजीवादको निर्माण गर्ने भनेका छौँ तर २० औँ शताब्दीको समाजवादको गन्ध आउँने ढाँचा अपनायो भने बाहिरी लगानी आउँदैन । समयानुकुल चल्न नडराउनुस् ।’ देश विकास नहुनुको पछाडी भाग्यबादी र ब्राम्हणवादी संस्कारलाई गम्भीर भएर नसोचेको भन्दै उनले जातप्रणाली र श्रमलाई विभाजन गर्ने विषयको अन्त्य हुनपर्ने खाँचो औँल्याए । उनले जातपातको विभ
नेकपामा झापाका १२ केन्द्रीय सदस्य
झापा, जेठ १० । हालै दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत भएपछिको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा झापाका १२ जना केन्द्रीय सदस्यमा पर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तत्कालीन नेकपा एमालेका १० जना र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका दुईजना पर्नुभएको हो । तत्कालीन एमालेबाट नेकपाको केन्द्रीय सदस्यमा हिक्मत कार्की, रवीन कोइराला, भास्कर काफ्ले, हरि राजवंशी, नरेश खरेल, युवराज कार्की, देवेन्द्र दाहाल, डा. युवराज खतिवडा र देवराज घिमिरे रहनुभएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ १० । रिड नेपाल नामक सामाजिक संस्थाले नेपालकै पहिलो अपांगमैत्री तथा बहुप्रकोप प्रतिरोधात्मक सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण गरेको जनाएको छ । नुवाकोटको बेलकोट नगरपालिका–२ मा जनजागरण सामुदायिक पुस्तकालयमा बाल कक्ष, सूचना सञ्चार प्रविधि कक्ष, विपद् जोखिम न्यूनीकरण कक्षलगायत नौवटा कक्ष र चारवटा पहुँचयोग्य शौचालय हालै निर्माण गरिएको छ । जनजागरण सामुदायिक पुस्तकालयको पुनःनिर्माण तथा समुदायमा आधारित समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरण परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएको उक्त पुस्तकालय भवन निर्माणमा रु एक करोड ७५ लाख खर्च गरिएको संस्थाका अधिकृत चिनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । मुलुकका विभिन्न स्थानमा पुस्तकालयको विकास गर्दै आएको उक्त संस्थाले समुदायमा आर्थिक सशक्तीकरणका विभिन्न परियोजना पनि सञ्चालन गरेको छ ।
ललितपुर, जेठ १० । काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका अधिकांश ढुंगा–गिट्टी उद्योगले प्रदूषण कम गर्ने कुरामा ध्यान दिएका छैनन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन इआइए प्रतिवेदनमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गर्छु भनेका कुरा कार्यान्वयन नगरेको पाइएको वातावरण विभागका उप–महानिर्देशक सफला श्रेष्ठले बताउनुभयो । विभागले नियमितरुपमा उद्योगहरुमा प्रदूषणको अवस्था बुझ्नका लागि अनुगमन गरिरहेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अनुगमनका क्रममा यी उद्योगले कुनै पनि खालको सावधानी अवलम्बन नगरेको पाइएको हो ।” ईआइए प्रतिवेदनमा उद्योगले गर्नसक्ने प्रदूषणको अनुमान गर्दै नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन् । धुलो नउडोस् भनेर दैनिक पानी छर्कने, वरपर ढाक्ने गरेर पर्खाल लगाउनेदेखि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपकरणको जडानसमेत पर्छ । उद्योग आफैँले पनि स्व–अनुगमन गरेर सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । उहाँ भन
चिनियाँ टोलीले थाल्यो नेपालमा रेलमार्गको अध्ययन
काठमाडाै‌ जेठ १०-केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु भएको छ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली बुधबार रसुवागढी नाकासम्म आइपुगेको छ। काठमाडौंबाट मंगलबार स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको चिनियाँ टोली बुधबार रसुवागढी पुगेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। अहिले भइरहेको प्राविधिक र भौगर्भिक अध्ययन रेलमार्ग निर्माणको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए। टोलीले काठमाडौंको टोखाबाट नुवाकोटको छहरे, खरानीटार विदुर हुँदै रसुवाको कालिकास्थान, राम्चे, धुन्चे स्याफ्रुबेसी र रसुवागढीसम्म विभिन्न प्वाइन्टको अध्ययन गरेको छ । केरुङदेखि काठमाडौंसम्म निकै जटिल किसिमको भौगोलिक अवस्था भएकाले यो टोलीले धैरै भौगर्भिक स्थितिको पनि अध्ययन गरिरहेको छ। टोलीमा भौगोलिक सहजताका लागि रेखांकन गर्ने इन्जिनियर पनि सँगै छन्। च
May232018 by DangkhabarNo Comments
भक्तपुर, जेठ ९ । काभ्रेपलाञ्चोकको साँगाबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको टिपरको ठक्करबाट आज तीन जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ । बा३ख ६६७४ नंको टिपरले बा५६प १२२७ नंको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटरमा सवार तीन जनाको मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । मृत्यु हुनेमा दोलखा मेलुङ–६ घर भई हाल मध्यपुरथिमि नगरपालिका–१ लोकन्थली बस्ने ५० वर्षीय स्कुटर चालक हरिबहादुर कटुवाल, करीब ४२ वर्षीया सविता घिमिरे र १३ वर्षीय अवीन्द्र घिमिरेको मृत्यु भएको हो । तीन जनाकै शव भक्तपुर अस्पतालमा राखिएको तथा ठक्कर दिने टिपरलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । टिपरका चालक भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
Previous 1 … 244 245 246 … 264 Next